Rocky Mountain Fellow - Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Maxaa kucusub CIRC > Rocky Mountain Fellow
Location: Buuraleyda Rocky ee Colorado (meel kasta oo ka timaada Salida, Leadville, Summit, Steamboat, Glenwood Springs, Rifle, Aspen, iwm). Halkan guji si aad u aragto khariidadda buuxda ee xubnaha.
Aagga(yada) barnaamijka iyo soo koobida guud: Ka mas'uul ah taageeridda xubnaha CIRC iyo bulshooyinka soogalootiga deegaanka ee Buuraha Colorado. Ka hawlgeli xubnaha CIRC ee gobolka iyo bulsho weynta si ay u abaabulaan ololaha istiraatijiyadeed ee CIRC iyo hawlaha dhisitaanka.
Warbixinnada ku saabsan: Abaabulaha Gobolka
Soo Koobid Urur
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) waa isbahaysi ku saleysan xubinnimada gobolka oo dhan oo ah muhaajiriinta, shaqaalaha, diimaha kala duwan, dhalinyarada iyo ururada isbahaysiga oo la aasaasay 2002 si loo dhiso cod mideysan oo gobolka oo dhan ah si loo wanaajiyo nolosha muhaajiriinta iyo qaxootiga ku nool Colorado iyo Mareykanka. CIRC waa urur 501 (c) (3) oo hoos yimaada Xeerka Dakhliga Gudaha waxayna ku guuleysataa hadafkeeda iyada oo loo marayo ka-qaybgalka bulshada ee aan xisbiyada ahayn, waxbarashada dadweynaha iyo u-qareemeynta si loogu guuleysto siyaasadaha dadweynaha ee caddaaladda, dadnimada iyo shaqada leh.
Xubinta Buuraha ee CIRC waxay mas'uul ka tahay la shaqaynta Qabanqaabiyaha Gobolka Buuraha si ay u taageerto xubnaha CIRC ee qaybaha miyiga ah ee buuralayda dhismaha bulshada deegaanka, bixinta tababarada xubnaha, iyo hirgelinta ololayaasha istiraatijiyadeed ee CIRC.
Tababarka iyo Horumarinta Hogaaminta
Ku xidh xubnaha tababarada iyo fursadaha dhismaha saldhiga
Bixi tababaro sida ay khuseyso, sida Ogow tababaradaada Xuquuqdaada
Xoojinta horumarinta xirfadeed ee asxaabta gaarka ah iyo falanqaynta siyaasadeed iyada oo loo marayo ka qaybgalka CIRC 2021 Program Fellowship.
Taageerada Ololayaasha Istiraatiijiga ah
La shaqee xubnaha, saldhiga iyo xulafada si loo horumariyo loona fuliyo qaybaha maxaliga ah/gobolka ee qorshayaasha ololaha gobolka oo dhan
Taageerada mudnaan-siinta heer-gobol/ deegaan (in lagu go'aamiyo si-goboleed) oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn:
Ilaalinta Shaqaalaha Beeralayda ee Colorado
Dib u milicsiga badbaadada dadweynaha iyo la xisaabtanka shariif ee Colorado
Caawinta COVID ee bulshooyinka soogalootiga ah ee Buuraha
Ku taageer xeeladaha warbaahinta maxaliga ah
Kutlada Miyiga cusub ee CIRC
Kiisaska khadka tooska ah iyo/ama taageerada adeegyada sharciga ee xubnaha bulshada
Taageerada shatiga darawalnimada ee xubnaha bulshada
Isuduwidda iyo Taageerada xubnaha CIRC ee Gobolka
Kordhi wacyigelinta bulshada, xooji isku xidhka jira, oo ku beer xidhiidho cusub bulshooyinka haajiriinta ah, gaar ahaan bulshooyinka miyiga ah, ee Buuraha Colorado. Tan waxaa ku jira 1:1s joogto ah oo leh xiriiryo cusub iyo kuwa jira iyo sidoo kale ka qeybgalka iyo ka qeybgalka dhacdooyinka maxalliga ah.
Xoojinta xidhiidhada shaqo ee mudada fog iyo isku xidhka ururada soogalootiga ku salaysan iyo kuwa soo baxaya ee ka jira gobolka buuraleyda iyo qorista ururo cusub si ay xubno uga noqdaan CIRC
Taageer Qabanqaabiyaha Gobolka ee Buuraha si uu u abaabulo oo u martigeliyo shirarka gobolka ee saddexdii biloodba mar.
Shaqeynta isku xirka ururada maxalliga ah, iyo CIRC Mountains Organizer (marka ay khuseyso).
Taageerida Isgaarsiinta Gobolka:
Taageerada qabanqaabiyaha si loo abuuro oo loo diro wararka gobolka ee xubnaha (waxay noqon kartaa qaab warside ah)
Xoojinta joogitaanka baraha bulshada ee gobolka ee boggaga facebook-ga ee gobolka
Isku xidhka gobolka iyo wargelinta inta uu Qabanqaabiyaha Gobolka Buuraha fasax ku maqan yahay.
Ka Qaybqaadashada Ururinta iyo Wada Shaqaynta Lacag Uruurinta
Taageer kooxda horumarinta ee CIRC inta lagu jiro maalin-siinta Colorado si loo gaaro yoolalka lacag-ururinta shaqsi/koox
Taageer qabanqaabiyaha gobolka si uu u fuliyo munaasabadaha dabbaaldegga 20 sano ee CIRC ee gobolka
Balanqaad Muujinaya ladagaalanka cabudhinta
Si firfircoon uga qayb-qaato CIRC-da gudaha ee ka-hortagga dulmiga iyo isku-darka dadaallada lagu horumarinayo aragtida dhaqanka urureed ee ka tarjumaya qiyamka/mabaadi'da aan u dagaalamayno bulshada dhexdeeda.
Awoodaha Muhiimka ah
Fikirka istiraatijiyadeed: Awood u lahaanshaha falanqaynta xaalada gobolka iyo deegaanka ee gobolkaaga si aad u taageerto Qabanqaabiyaha si uu u horumariyo ololayaasha abaabulka ee dhisa awooda gobolka.
Xirfadaha ururka: Awoodda abaabulka dadka iyo dhacdooyinka. Awoodda aad ku maareyn karto wakhtigaaga jawi shaqo oo degdeg ah.
Xidhiidh adag: Ilaali iskudubarid iyo xidhiidh wax ku ool ah oo aad la yeelato qabanqaabiyahaaga, xubnaha, shaqaalaha iyo daneeyayaasha.
Wada shaqeynta iyo wada shaqeynta: Dabacsanaanta, rabitaanka, iyo awooda in si wada jir ah loola shaqeeyo shaqsiyaadka iyo ururada kala duwan.
Daba-galka: Ballanqaadka dabagalka iyo la xisaabtanka si loo gaarsiiyo heerka ugu sarreeya ee taageerada xubinnimada CIRC ee gobolka.
Ballanqaad: rabitaanka barashada iyo korriinka xirfad ahaan iyo shakhsi ahaanba. U heellanaanta caddaaladda soogalootiga iyo in la dhiso hoggaanka kuwa ay si toos ah u saameeyaan nidaamka socdaalka.
Murashaxu waa inuu ku noolaadaa Buuraha Rocky ee Colorado
Murashaxu waa inuu lahaadaa gaadiid la isku halayn karo inta lagu jiro wakhtiga wehelnimada
Musharaxa waa inuu haystaa taleefoonka gacanta
Musharaxa waa in uu leeyahay xidhiidh wifi la isku halayn karo
Booskani waxa uu u baahan yahay in gobolka gudahiisa loo socdaalo dhacdooyinka sida shirarka bulshada iyo dhacdooyinka todobaad kasta
Labada-Luuqad - Ingiriis iyo luqad labaad oo ka tarjumeysa dadka soogalootiga ah ee ku nool gobolka.
COVID-19 iyo Shaqada Fog: Dadaalka lagu ilaalinayo badbaadada iyo caafimaadka kooxdayada iyo bulshooyinkayada inta lagu jiro dhibaatada caafimaad ee dadweynaha, dhammaan shaqaalaha CIRC, oo ay ku jiraan asxaabta, waxay sii wadi doonaan shaqada guriga ilaa ogeysiis dambe.
Laga bilaabo Luulyo 5, 2022 ilaa Sebtembar, 2023.
Tani waa waqti buuxa, 15 bilood dheer, boos midaysan
Mushaharka iyo Manfacyada:
$20.28/saacaddii. Booskaan waxaa ku jiri doona lacag celinta masaafada safarka gudaha gobolka. Waxa jiri doona muddo saddex bilood ah oo tijaabo ah.
Siyaasadda deeqsinimada leh ee PTO: Dhammaan shaqaalaha CIRC ee wakhtiga buuxa waxay ku bilaabaan laba toddobaad oo fasax ah oo lacag ah, marka lagu daro fasaxyada la ilaaliyo. Shaqaaluhu waxay sidoo kale helaan usbuuca inta u dhaxaysa Diisambar 24-keeda iyo Janaayo 2deeda fasax lacag ah.
Lacagta Taleefanka Gacanta: CIRC waxay bixin doontaa $75 gunno bishii si ay u taageerto isticmaalka taleefankaaga gacanta
Caymiska Caafimaadka: Isku-xidhaha Gobolka, iyo sidoo kale ilaa laba qof oo ku tiirsan oo da'doodu ka yar tahay 18, waxay xaq u leeyihiin inay helaan %100 caymiska caafimaadka, aragga iyo ilkaha ee loo-shaqeeyaha kafilo laga bilaabo maalinta koowaad ee shaqada.
Horumarinta Xirfadlaha: $1,000 oo ah maaliyadda horumarinta xirfadda sannadkii
Waxaa dib loo soo celin doonaa kharashaadka inta lagu jiro muddada shaqadaada caadiga ah ee heerarkan soo socda:
Masaafada - 65 senti maylkiiba
Kharashaadka safarka iyo saadka waa la soo celin doonaa iyadoo lagu salaynayo oggolaanshaha foomamka iyo rasiidhada la gudbiyay.
Si aad u dalbato, fadlan emayl u dir jobs@coloradoimmigrant.org resume-kaaga iyo jawaabahaaga ku saabsan su'aalaha ku lifaaqan marka la gaaro Juun 12, 2022.
"Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado waxaa ka go'an in si buuxda loogu daro dhammaan shakhsiyaadka u qalma. Iyada oo qayb ka ah ballan-qaadkan, waxaanu hubin doonaa in dadka naafada ah la siiyo hoy macquul ah. Haddii hoy macquul ah loo baahdo si looga qayb qaato codsiga shaqada ama habka waraysiga, fadlan la xidhiidh paola@coloradoimmigrant.org. CIRC waa shaqo-bixiye loo siman yahay mana takooro ku salaysan isir, jinsi, diin, asal qaran, aqoonsiga lab ama dhedig, nooca galmoodka, naafanimada, da'da, ama nooc kasta oo kale oo ay ilaaliyaan sharciyada maxalliga ah, gobolka, ama federaalka. Waxaa naga go'an inaan dhisno koox shaqaale oo kala duwan, sinnaan leh, oo loo dhan yahay. Waxaan si adag u dhiirigelinaynaa codsadayaasha ah dadka midabka leh, LGBTQ, haweenka, trans iyo jinsiga dadka aan waafaqsanayn jinsiga, dadka naafada ah; iyo/ama dad hore u xidhnaa."